सेवा वृद्धि गर्दै मुटु अस्पताल -::DainikPatra
सेवा वृद्धि गर्दै मुटु अस्पताल
बुटवल । बुटवलमा रहेको गौतम बुद्ध सामुदायिक मुटु अस्पतालले मुटु तथा मृगौलाको उपचारमा सुविधा बृद्धि गर्न विभिन्न उपकरण ल्याउन लागको छ । माघ १ गतेदेखि ३ सय६५ दिन नै ओपिडी सञ्चालन गर्ने अस्पतालले मृगौलाको निशुल्क डायलाइसिस सेवा पनि प्रदान गर्दैछ ।
सरकारले हालै मृगौला डाइलाइसिसका लागि मुटु अस्पताललाई अनुमति प्रदान गरेको थियो । ६ वटा डायलाइसिस मेसिनबाट सेवा दिदै आएको अस्पतालले तत्काल ११ वटा मेसिन थप गरी सेवा प्रदान गर्ने भएको हो । यति धेरै डायलाइसिस उपकरण भएको यो राजधानी बाहिरको पहिलो अस्पताल हुनेछ ।
गौतमबुद्ध सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थाद्वारा सञ्चालित मुटु तथा मृगौला उपचार केन्द्रमा क्याथल्याव, सिटिस्कान मेसिनबाट सेवा दिने तयारी गरेको छ । संस्थाका अध्यक्ष एजाज आलमले आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै पश्चिम नेपालका विरामीहरुलाई मुटु र मृगौलाको उपचारका लागि राजधानी जान नपर्ने गरी सेवा विस्तार गरिने बताए ।
तीन वर्षअघि बुटवलका रामनगरमा सञ्चालनमा आएको अस्पतालमा मुटु, मृगौला र छाति रोगको उपचारका लागि ८ जना विशेषज्ञ डाक्टरहरु रहेका छन् । मृगौलाको डायलासिसि तथा क्याथल्याब सञ्चालनका लागि समेत विशेषज्ञ टोली बनाइएको छ ।
मृगौलाको डायलासिसिका लागि साताको सबै दिन सेवा दिइने अस्पतालले जनाएको छ । १७ वटा मेसिनबाट एक दिनमा कम्तिमा ५१ जनाको डायलाइसिस गर्न सकिने अस्पतालमा कार्यरत मृगौलारोग विशेषज्ञ डा. शक्ति बस्नेतले बताए ।
अस्पतालले १ सय २८ स्लाइसको सिटीस्कान मेसिन समेत ल्याउने तयारी गरेको छ । काठमाण्डौंको टिचिङ अस्पतालमा बाहृेक अन्य अस्पतालमो यति ठूलो सिटी स्कान मेसिन नरहेको अस्पतालले जनाएको छ । सो मेसिन भए पछि मृगौला, मुटु, छातीको सिटिस्कानका लागि बाहिर जानु नपर्ने संस्थाका अध्यक्ष आलमले बताए ।
अस्पतालले उपचार उपकरण ल्याउनका लागि चार वटा रोटरी क्लवसंग सहकार्य गरेको छ । अस्पतालले उपचारमा लिदै आएको शुल्क समेत घटाएको छ । एक सय रहेको ओपिडी शुल्क अव ५० रुपैयामा बनाइएको अध्यक्ष आलमले बताए । त्यस्तै इको, इसिजी, जनरल हेल्थ प्याकेज, फुलबोडी चेकअप, थाइराइड परिक्षणको शुल्कसमेत घटाएको छ । त्यस्तै अवदेखि साताको सबैदिन १० रुपैयामा सुगर र ब्लड प्रेसर परिक्षण गरिने अस्पतालले जनाएको छ । अस्पतालले आफ्नो फार्मेसीबाट बिक्री हुने औषधिमा १० प्रतिशत छुट समेत दिदै आएको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै पत्रकार महासंघ रुपन्देहीका अध्यक्ष शेरबहादुर केसी, रेडियोलोजिष्ट डा. सुदिप थापा, संस्थाका सचिव दिनेशराज रेग्मी लगायतले बोलेका थिए । रुपन्देही उद्योग संघका संरक्षकत्वमा अस्पताल सञ्चालन भएको हो ।
नगरपालिकाले बाड्यो हजार दिनका आमाहरुलाई अण्डा
लाखौंको लगानी तर जिम्मेवारी छैन
पाणिनि तपोभुमीको प्रचारका लागि धार्मिक महायज्ञ